Miasa andro aman’alina, hono… | NewsMada
Miasa andro aman’alina, hono…
Miasa andro aman’alina, hono, rey olona, izao fitondrana izao amin’ny fanafoanana ny delestazy. Atao hoe “hono” ny resaka, na vava tsy ambina aza: efa impiry izay fanamby sy fampanantenana izay? Izay manisa indray no reraka, fa tsy izay milela-molotra isaky ny miteny.
Tena mba miasa andro aman’alina tokoa ve izao fitondrana izao? Na marina izay lazainy… Raha tsy hiteny afa-tsy ny delestazy: hatraiza no ndeha hinoana izany? Izay lazaina hoe hofoanana ao anatin’ny telo volana, vao mainka mitombo sy mihamahery vaika nandritra ny telo taona.
Tsy hita izay vahaolana amin’ny delestazy, nefa hoe miasa andro aman’alina. Mbola azo antoka hahomby ve izany, mahalala sy mahay ny asany, hahitam-bokatra… ? Telo taona be izao, tsy misy vahaolana mazava ny delestazy, na nampanantenaina sy nanaovana fanamby toy inona aza.
Tsy vitan’izany, ho toy ny telo volana sy telo taona ihany ny raharaha: tsy misy fialan-tsiny amin’ny anton’ny tsy ahombiazana, tsy misy fanazavana amin’izay tena atao hoe aiza sy rahoviana… ? Izay mampitaha ny ankehitriny amin’ny lasa indray no diso, tsy mahita inona sy ahoana.
Lehibe tsy mba diso? Na hafa amin’izay lazaina aza ny atao, indrindra ny zava-misy sy izay iainan’ny vahoaka… Mila porofo? Fototra sy fositry ny raharaha ny tsy fananana foto-kevitra sy vina mazava amin’izay atao. Ao anatin’izany ny kitsapatsapa amin’ny fandaharanasa, paikady…
Natao fotsiny izay hakana sy hitanana fahefana, fa na ny fahazoana maro anisa eny anivon’ny Antenimierampirenena aza, tsy nahoany sy tsy neritreretina. Tsy mahagaga amin’izany ny fandikan-dalàna amin’ny fomba fanolorana praiminisitra, ny fivadibadihan-dela lelafina isaky ny miteny…
Eo koa ny kolikoly, ny kitsapatsapa, ny amboletra… Ny fanaovana politika mihitsy no tsy ao, tsy neritreretina hatrany am-boalohany. Hahagaga raha tsy mandeha amin’izay izy ny fitondrana? Delestazy avy tsy afaka firy tao-maty. Izay mitsikera fa tsy te hanan-dratsy indray no diso.
Miasa andro aman’alina, hono, mahay, mahavita be, sahy… Hoentina aiza ny firenena mankany mankany… ?